नेपाल आज | के नेपाल टेलिकमले कल ट्र्यापिङ गर्ने सिस्टम राखेको छ? (भिडियोसहित)
के नेपाल टेलिकमले कल ट्र्यापिङ गर्ने सिस्टम राखेको छ? (भिडियोसहित)
बिहिबार, ०८ जेठ २०७७ गते प्रकाशित - नेपाल आज (MG)
काठमाडाैं । नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले टेलिकमको सेवालाई अझै बढी गुणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन आफुहरु लागिपरेको बताएका छन् । नेपाल आजसंग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
लकडाउनका बेला पनि टेलिकमको सेवामा कहिँ कतै समस्या नभएको दावी गर्दै उनले यहि आगामी दिनमा पनि यहि रफ्तारमा कायम गर्दै झन् प्रभावकारी बनाउदै लगिने बताए ।'हामी अहिले यो भएको गुणस्तरलाई अझै बढी गुणस्तरिय बनाउछौं, अझ बढी क्षमता बिस्तार गर्छौं । अझ बढी पँहुच बिस्तार गर्छौं ।' उनले भने ।
लकडाउनको कारणले बन्द भएका सबै आयोजनाहरु लकडाउन खुला भएलगत्तै सुचारु हुने उनले बताए । अर्को प्रसंगमा उनले अहिले नेपाल टेलिकमले कसैको पनि कल ट्रयापिङ गर्ने सिस्टम नराखेको बताए । 'हाम्रो सिस्टममा अहिले हामी कसैलाई पनि कैसैको फोन ट्रयापिङ गर्ने प्रविधि संचालन गरेका छैनौं।' उनले भने -'तर केछ भने स्मार्ट फोनबाट स्मार्ट फोन गर्दाखेरि ग्राहकको मोबाइलमै अटोमेटिक्ली फोन रेकर्ड हुन्छ । त्यो नेपाल टेलिकमको सिस्टमबाट बहेकै होइन ।'
नेपाल टेलिकमको सिस्टमले कुन कुन ग्राहकलाई कुन समयमा कोसँग फोन गरेको थियो भन्ने बारेमा चाहिँ जानकारी दिनसक्ने उनको भनाइ छ । तर त्यसका लागि पनि कुनै बिशेष बिषयमा अनुसन्धान गर्नुपरे त्यसका लागि जिल्ला अदालादतबाट आदेश आएको हकमा नेपाल प्रहरीको सिआइबिले डाटा माग्दा मात्रै दिन सकिने उनले बताए ।